Ma dhab baa in Kooxda Inter Milan ay Lautaro Martinez ku dabeyso Lionel Messi? – Gool FM
(Milan) 07 April 2020. Naadiga Inter Milan ayaa lagu soo warramayaa in ay damac weyn ka leedahay lasoo saxiixashada Lionel Messi.
Inter ayaa isku dayaysa xagaagan in Barcelona ay kasoo qaadato kabtankeeda iyadoo Lautaro uu heshiiska qayb ka noqonayo, maadaama kooxda reer Spain ay si daran u xiiseyneyso 22-jirka weerarka ka ciyaara.
Messi iyo Martinez mustaqbalkooda ayaa midba si gaar ah shaki ugu jiraa, waxaana lala xiriirinayaa inay faarujiyaan kooxahooda.
Kabtanka Argentina ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay lala xiriirinayay ka tagista Camp Nou xagaagan, maadaama heshiiskiisa uu u ogolaanayo inuu xagaagan haddii uu doono bilaash ku dhaqaaqi karo.
Si kastaba ha ahaatee, Inter ayaa kusoo biirtay kooxaha lala xiriirinayo inuu ku biiri karo, taasoo Nerazzuri ku riixeysa inay Lautaro Martinez ka iibiyaan Barca si ay macaamiil wanaagsan ula yeeshaan kooxda reer Spain.
Suuro galnimada ah in la isku beddesho labada weeraryahan ee reer Argentina ayaa ah mid aanan sahlaneyn, marka loo fiiriyo maqaamkooda iyo sida ay kooxahooda uga maarmi karaan.